ONLF oo Kulan Balaadhan ku Qabtay Nairobi – Rasaasa News
ONLF oo Kulan Balaadhan ku Qabtay Nairobi
Jijiga, Dec 3, 2014 – Todobaadkan waxaa magaalada Nairobi ka dhacay shir balaadhan oo dhaqaale loogu uruurinayo Jabhada wadaniga Xoraynta Ogadeeniya [Jwxo]. Kulankan oo aan noociisa oo kale hore loogu qaban dalka Kenya ayaa halkudhagiisu ahaa “Bixi ama Buntukha Qaad”.
Dadka kulanka joogay iyo inta daawatayba waxaa ka fajiciyey tirada dadka yimid kulanka iyo sida dhiiranaanta leh ee kulanka dhexdiisa yabooha loogu sameeyey, iyada oo aan ognahay in xiligan dunida aad loo ilaaliyo lacagaha aan la diiwaangalin, tani waxay muujin in Jwxo ay kalsooni isku qabto tahayna Jabhad dunidu aqoonsan tahay. Kulanka waxaa lagu yaboohay lacago aad u fara badan oo ay bixiyeen taageerayaasha iyo ganacsatada Somalida ee deganka Nairobi.
Dad badan waxay iswaydiin karaan sababta keentay kalsoonidan faraha badan iyo kasbashada cududa shacabka sida ay ONLF ku heshay?
Dadka xiiseeya arimaha siyaasada Ogadeeniya, waxay aaminsan yihiin in awooda wiiqantay ee ONLF sanooyinkii tagay in ay ugu wacnayd khaladaad siyaasadeed oo abuuray khilaaf taariikhda galay oo ka dhex dhacay hogaaminta ururka, kaas oo hanjabiyey kalana diray dadwaynihii taageeri jiray ONLF, dabadeedna ay Atoobiya ka faa,iidaysatay arintaas.
Sida la aaminsan yahay ONLF, waxay muujisay adkaysi halgan, ka dib kolkii ay kaga kacday Atoobiya gogol caalami ah oo ka dhacay Nairobia, kolkii ay Atoobiya mardabo la timid kulanka. Waxaa kale oo ay u adkaysatay bahdilo badan oo soo gaadhay halganka.
Atoobiya dhankeeda waxay ku dadaashay sidii ay sabaale dhaqaale ugu soo jiidan lahayd qurba-joog hore u taageeri jiray ONLF iyo kuwa aan taageeri jirinba, laakiin dhabta way dabooli wayday “gumaysi” [qaybinta iyo qolo qolaynta shacabka degaanka gude iyo dibadba], taas oo ay ka niyada jabeen dad badan oo u hiyi kacay durbaanka ay tuntay.
Arinta kale ee muhiimka ah, Ismaamulka Kilalka oo ay masuuliyiintiisu iskaga horyimaadeen durbaankii runta ka fogaa ee ay tumayeen sanooyinkii tagay. Khilaafka iyo colaada u dhaxaysa masuuliyiinta Kilalka oo la mid ah midkii ONLF 2005/9, ayaa saameeyay haatan shacabka degaanka. Sida la xaqiijinayo dad badan baa ka huleelay degaanka, waxaana soo if baxay arimo la xidhiidha isbeelaysi, dibadaha waxaa ka dhacay shirar beelaysan iyo boggag wax baahiya oo lid ku ah hogaanka maamulka Kilalka.
Amuurta ugu muhiimsan ee kaabtay kulanka Nairobi, waa hogaanka ONLF oo bishii hore tagay Kenya, kaas oo sameeyey abaabul hoose kulamana la qaatay hogaan dhaqameedka iyo siyaasiyiin Kenyan ah, kuwa Somali ah iyo dad badan oo ka soo jeeda dhulka Somalida Ogadeeniya. Kulamadaas oo kuligood ku dhamaaday isfaham, taageerana loogu muujiyey ONLF.
Sida aan ka soo xiganay xubno ka tirsan hogaaminta ONLF u joogta Nairobi, waxaa jiray shirar hoose oo lagu qabtay Kenya oo lagu gudoonsaday olole dhaqaale oo lagu xoojinayo halganka. Horay waxay ONLF dibu habayn ugu samaysay dhinaca arimaha milatariga, waxayna kordhisay weerrada ay ku qaado ciidamada Atoobiya.
Ololahan “Bixi ama Buntukha Qaad” dhaqaale uruurinta ee ONLF ay ka bilowday Kenya, waa mid socon doona oo lagu qaban doono; Koonfur Afrika, Carabta iyo reer galbeedka.
Waraysi uu hogaanka ONLF dhawaan siiyey boggaga Jabhada, isaga oo jooga Eritariya ayuu kaga hadlay halka ay beegsanayaan iyo kacdoon cusub oo ku lid ah doorashada la sugayo in ay ka dhacdo Atoobiya. Hogaanka ayaa waraysigiisa laga helay in ay ONLF isu diyaarinayso in ayna doorasho ka dhicin dhulka Somalida Ogadeeniya.
Ololahan iyo talaabooyinka kasbashada leh ee ay qaadayso ONLF, waxay abuuri karaan aragti midaysan iyo kalsoon ay Jabhadu ka hesho guud ahaan Somalida iyo gaar ahaa Somalida Ogadeeniy oo ay Atoobiya laf dhuunta taagan ku tahay.
Maxaa Loo Joojiyey Mashaariicda Dadwaynaha?
Awdalstate: Maya Maamulka Soomaaliland